Zvisungo zvinopesana neHurumende Nyaya dzaJordie Zwarts zviri kupinda mumatani, asi hapana chaari kuita: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 14 May 2020	• 4 Comments
Iwe unogona kuyamwa mune whirlpool yemari, sekusimudzirwa naRobert Jensen mune yake kupedzisira kupedzisira, asi chii chinoitika kumari yako? Iniwo ndakasvitswa kuti nditsigirwe neakatanga weBond vachipesana neHurumende, Jordy Zwarts (ona foto), asi aine chiitiko chakafanana ne5G haasati awana chinhu. Akazviita, zvisinei, akasimudza makumi ezviuru euros (akawanda masosi) uye yakafanana inogona kutarisirwa mumatare edzimhosva achipokana nekuvharika uye imwe nehafu mamirimita matanho kubva kuhurumende.
"Nei iri yemari vortex uye wave kutotaura kuti hazvizove chinhu Vrijland? Zvino batanidza mauto! Café Weltschmertz inomutsigira, Jensen anomutsigira!“Nekuti vatongi nemagweta vanopika kuti chigaro chekutonga (imba yeumambo) uye havazomborerutsi zvavakapika nekupika.
"Ehe, asi matanho e coronavirus haana kupokana! Ivo vanogona chaizvo kuwana chimwe chinhu!"Chinhu chimwe chete chinogona kuita Jordy Zwarts ndechekuti account yake yebhangi inokwira uye kuti Robert Jensen ("jensba33") Anobatsirwa nokumusimudzira. Panguva ino, iwe unomirira uye usaite chinhu.
Chokwadi unogona kunyatsoziva izvozvo pachako, asi ini ndakakuyambira. Ini ndinofunga isu tinotofanira kumuka kune zviri kuitika.
Kuburikidza naRobert Jensen naJordy Zwarts (iyo Federal Government Affairs) iwe unoramba uchiisa iko kune vamwe. Iwe unoisa € 29 uye wozotarisira kuti gweta richaisa mhosva, iyo inogona kana inogona kusakundwa. Iwe unonyatsoda kuve asina musoro uye uchitenda kuti mutongi anozotonga nyika? Kwete kwete. Vese vakapika kutendeka kune korona.
Hatina nguva yekutambisa. Iminiti 1 pamberi pa12. Hurumende yanhasi yakaratidza kuti inogona kushandura nharaunda yese pasi mukati memavhiki mashoma. Izvo zvaigona kumbofungidzirwa zvisiri zvechokwadi uye zvisingaitike zvakasimbiswazve munguva pfupi. Hupfumi hwese uye nzira yese yekugara pamwechete yakashandurwa. Izvi zvinoreva kuti kuchinja nekukurumidza zvinoita. Saka shanduko inogona kuenda nekukurumidza zvikuru.
Izvo hazvisi kuzotarisira shanduko kubva kuhurumende kana kutarisira shanduko kubva kuBond kunopesana neHurumende Affairs. Isu tinofanirwa kuzviita isu pachedu! Hatifanire kushandura kushushikana kwedu kumirira mubatanidzwa, tinofanira kushandura kushushikana kwedu kuve simba uye chiitiko chekonkire. Kuzvidzidzira pachako, zviite iwe pachako. verenga enderera apa ...
Robert Jensen (jensen.nl) uye 'misa kuvharika', izvo, maererano naMartin Vrijland, ndeyeti yekuchengetedza
Tags: Gumi, magweta, advocaat, imwe nehafu, chisungo, coffee, de, Featured, constitution, Jensen, jensen.nl, jordy, lockdown, mita, nyaya dzehurumende, proces, hurumende, Mira, against, Weltschmertz, yakanyorova, nhema
Kune vaverengi vatsva: Freemason inogara ichikuzivisa iwe kuti ndevako mukirabhu. Nhamba makumi matatu nenhamba yakakosha yeMasonic.
Iyo yakanzi Jensen nhepfenyuro inotora maminetsi makumi matatu nemashanu uye Jensen anozvidaidza kuti Jensababa33.
Tora mufananidzo? Akadzora kupikiswa.
Baba munhu mukuru akasimba muAfrica kubva kune imwe yenyika dzakatenderedza Gulf yeGuinea. Akapambwa mutengesi wevaranda uye akatengeswa munyika itsva. Kwenguva yakareba akatungamira hupenyu hwevaranda pane yekudyara kweAmerican, kusvikira asunungurwa nemupirisita Redbeard. Kubva ipapo, anga ari mumwe weakavanzika emutyairi wembavha anotyisa, pamwe chete naTrodod nemwanakomana akaberekerwa naRedbeard Erik. Hanzvadzi yake Aïcha aive muranda muAlgiers, akaurayiwa mushure mekubatsira Erik kutiza guta.
Yakakura, yakasimba kwazvo uye inoshambira senge dolphin. Iye haakwanise kududza "r", izvo hazvireve kuti haana kuchenjera, nekuti kazhinji ane mazano akanaka uye akangwara ane hunyanzvi hwekuzivisa. Ndokusaka Roodbaard naErik vanogara vachisiya sangano rekurwisa nyika kuna Baba.
Ehe, yakawanda ye b (l) ab (l) a…
Chikonzero icho Jensen arikuisa zvese zvekutarisisa kwake paBond kunopesana neHurumende nyaya (uye achazozviita zvakare mangwana) imhaka yekuti haugone kupinda muchirongwa chehurumende chemahara. Iwe unofanirwa kugara mumambure akachengetedzwa uye, pamusoro pezvose, usashambira kubuda uye kutanga iwe pachako.
Nguva yekuita izvozvo zvakadaro: https://www.fvvd.nl/
« Iwe unofanirwa kutora kana kuramba iyo Covid-19 yekudzivirira kana ikave yekumanikidza? Kuitei?
Direct demokrasi nzira yakapfupika kubva kuvharika nekudzoreredza hupfumi »
Kushanya kwakazara: 2.422.562